Wazi njani ukuba ukuvavanywa kwemveliso kwiAmazon kuyinyani | I-Androidsis
Ngomso nangemva koko, kubhiyozelwa i-Amazon Prime Day 2019, iintsuku ezimbini apho unokufumana isixa esikhulu sezibonelelo kwivenkile edumileyo. Nangona ye- abanye bathanda iXiaomi Mi Band 4 akukho mfuneko yakulinda nantoni na. Xa uthenga iimveliso ezininzi, sihlala sizisekela kwimilinganiselo yemveliso, amagqabantshintshi abasebenzisi abayithengileyo.
Ngelishwa, inokwenzeka loo nto Kukho uphononongo olungelulo kwezinye iimveliso kwiAmazon. Ke oku kunokubangela ukuba uthenge imveliso engenzi ngenene into ethembisa yona okanye engekho njengoko ubulindele ukuba ibe yiyo. Nangona kukho indlela yokwazi ukuba ingaba olu vavanyo alunamanga okanye cha.
Ngale ndlela, siyakuphepha ukuthenga into ngokusekwe kuvavanyo lobuxoki. Ukusukela ikakhulu ngemihla efana nale, nge-Prime Day kufutshane nekona, olu hlobo lwamaxabiso luyanda. Ke kufuneka silumke ukuze siphephe ukuwela kuzo. Kukho iingcebiso kunye namaqhinga ancedayo, ukongeza ekubeni nakho ukusebenzisa izixhobo.
Fumana iXiaomi Mi Smartaband 4 ngexabiso elingaphantsi kwama-30 euros kwiAmazon
2 Indawo yobuxoki
Ngokunokwenzeka uninzi lwenu sele nilwazi olu sicelo, esinokuthi silukhuphele njengoko ulwandiso kwiGoogle Chrome. Enkosi kuyo sinokujonga ukuba uphononongo kwiAmazon alunamanga okanye cha. Yiyo loo nto siya kuba nakho ukuluthintela olu hlobo lwamaxabiso kwivenkile eyaziwayo kwaye singangeni kwimigibe esenza sithenge imveliso engazalisekisi isithembiso sayo.
Ukusebenza kwayo kulula kakhulu. Lijongene nokuhlalutya uvavanyo lwemveliso esikuboneleleyo, iyakusicela ikhonkco kwaye emva koko baya kugqiba ukuba zingaphi kwezi ngxelo zibubuxoki. Ipesenti iboniswa apho kubonisiwe ukuba zingangaphi. Akunyanzelekanga ukuba zibekho, kodwa kukho ubungqina obucacileyo bokucinga ukuba abonyani. Ngenxa yoku, bahlala bejonga amabinzana aqhelekileyo okanye amanqaku athile kolu vavanyo.
Ngale ndlela, uPhononongo lweMeta luya kusinika ixabiso eliqhelekileyo lemveliso esele ithethwe kwiAmazon, kususwe iireyithingi zobuxoki. Ke sifumana idatha echanekileyo, eya kuthi isincede kakhulu kule nkalo. Kuba kunokubakho iimveliso ezithile kuvavanyo lobuxoki oluninzi, kangangokuba zinokutshintsha amanqaku okwenyani ale mveliso. Singalufumana usetyenziso simahla kwi-Android. Ukongezwa kwayo kweGoogle Chrome, kule khonkco.
Umthuthukisi: I-BMU Media GmbH
Olona khetho lusaziwa kakhulu kubasebenzisi abaninzi. Sifumana iqonga lokuhlalutya, apho sinokujonga khona ukuba imveliso inemilinganiselo engeyiyo okanye hayi. Yinto esinokuyisebenzisa ngenani elikhulu lamaphepha ewebhu, kwimeko yeAmazon. Umsebenzi uyafana nolo lukhetho silukhankanyileyo ngaphambili.
Kuya kufuneka singene kwikhonkco lemveliso esele ithethiweNokuba ivela eAmazon okanye kwenye ivenkile. Emva koko iphepha liya kuhlalutya kuvavanyo oluthe imveliso inalo kwaye liza kusibonisa ipesenti eqikelelweyo ukuba ayinyani kule meko. Ke sinokwazi ukuba sisixa esimangalisayo sokuvavanywa kobuxoki okanye hayi. Ikwasibonisa uqikelelo lwamaxabiso aphakathi kwale mveliso ngaphandle kokuthathela ingqalelo uphononongo olungelulo, ukuze sibe neenkcukacha ezingakumbi malunga noku ezikhoyo.
Ngaba kunokwenzeka iqonga elikhulu kule ndawo yokufumanisa ubudenge. Ke ngoko, lukhetho olufanelekileyo lokujonga. Kuba ithembekile, inamaphepha amaninzi ewebhu afumanekayo (iAmazon, iSteam okanye iTripadvisor) kwaye isebenza ngendlela elula. Ke kwimizuzu embalwa siyazi ukuba uvavanyo aluchanekanga kwaye luyimveliso mhlawumbi ekungafanelekanga ukuba siyithenge, kuba akukho luvavanyo lokwenyani. Ukwenza oku, kuya kufuneka usebenzise iwebhusayithi yeFakeSpot, ungandwendwela kule khonkco. Ukusuka kuyo kuya kufuneka ufake ikhonkco lemveliso evenkileni kwaye ulinde ukuba ihlahlelwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ungazi njani ukuba uphononongo lwemveliso kwiAmazon ayisiyonyani
Amazwe aMbiyo yinkqubo ye-RPG ekwi-Intanethi ethembisa